Codsiga saxda ah ee nematicide - hal-abuurka beeraha Joornaalka Nidaamka Baradhada
Aad bay muhiim u tahay in si sax ah loo isticmaalo nematicides. Adam Clark waxa uu booqday beeralay baradho Lancashire ah kaas oo wax ka beddelay beertiisa si uu u helo bacrin sax ah oo badbaado leh.
Si loo qaado codsiga nematocide heer cusub oo sax ah iyo badbaado, beeralay baradho Lancashire ah ayaa wax ka beddelay nidaamka beeritaanka si loo hubiyo in pellet kasta la dhigo sida saxda ah meesha ay tahay.
Andrew Webster wuxuu beeraley koonfurta Ormskirk, Lancashire, oo ku taal bartamaha aagga xididdada xooggan iyo beerashada kaabajka, taas oo ku abuurta dhibaatooyinka cayayaanka 182 hektar ee uu isagu leeyahay iyo dhul kiro ah.
nematodes noolaha xorta ah iyo wireworms waxay noqon karaan khatar halis ah. Khatarta ugu weyn ee ganacsigiisa baradho ee 73 ha waa baradhada cyst nematode (PCN). Si loo xalliyo dhibaatadan, Webster wuxuu kordhiyaa muddada beerista isagoo helaya dhul kiro ah oo nadiif ah oo ka baxsan tiisa.
Waxa kale oo jira diiradda lagu hagaajinayo nadaafadda berrinka iyada oo si fiican loo xakameynayo haramaha inta lagu jiro wareegga, iyadoo la yareynayo khatarta faafinta nematode-ka dalagga kale.
Iyada oo qayb ka ah qaabkiisa guud, Webster wuxuu isticmaalaa nematorin granular nematicide nematorin (fostiazate).
"Waxaan ku rakibnay kala qaybiyahayaga Pearson Megastar sababtoo ah waxay ku habboon tahay nidaamkayaga wakhtigaas, laakiin had iyo jeer si habboon uma qasin alaabta ciidda. "Waxay sidoo kale u oggolaan kartaa ciidda inay ku dul socoto sprockets iyada oo aan la jebin, markaa haddii aadan taxaddarin, alaabta waxaa lagu tuuri karaa dhinaca iyada oo loo marayo marin-biyoodka," ayuu yidhi Webster.
Haddii nematicides sida Nematorin lagu dabaqo mid aad u qoto dheer, aagga xididka kama ilaalinayo weerarka nematode, liddi ku ah, haddii aad u qoto dheer, ciidda xad-dhaafka ah ayaa walaaqdaa alaabta waxayna yaraynaysaa waxtarkeeda. Calaamadda sheyga Nematorin waxay ku talinaysaa codsiga safka ballaaran ee qoto dheer ee 10-15 cm si loo helo natiijooyinka ugu fiican, sidaas darteed Webster wuxuu helay hab loo isticmaalo habka beerashada oo uu gaaro qoto dheer oo ah 15 cm si joogto ah oo sax ah intii suurtagal ah.
Waxa uu isla markiiba ogaaday in aanay jirin wax soo saaruhu oo si toos ah u soo bandhigay nidaamka xakamaynta qoto dheer ee beeralayda. Si kastaba ha ahaatee, ka dib marka laamigu dhaafo, qoto dheer ee wareegyada ayaa si weyn u kala duwanaan kara iyadoo ku xiran xajmiga dhagxaanta iyo dhogorta ciidda, taas oo keeni karta codsi aan sinnayn oo nematocide ah.
Webster waxa uu helay isticmaalka kontoroolka qoto dheer ee tooska ah ee iskiis u shaqeysta Agrifac dabocase, kaas oo isticmaala potentiometer ku xiran gacmaha kor u qaadista si uu si toos ah ugu hayo dhamaadka hore ee qoto dheer ee la rabo.
Waxa uu u dhawaaday Massey Ferguson si uu u eego in potentiometer la dul dhigi karo beeralayda oo ay koontarooli karto kantaroolka fulinta daba-galka ah (TIC) ee cagaf Massey Ferguson 6616 Dyna-6 loo isticmaalo beertiisa baradhada.
Akhri war buuxa
Tags: nematicidesqaabaynta baradhadacodsiga bar
Ruushka, waxaa jira khatar ah inuu hoos u dhaco dalagyada beeraha
Ku saabsan waayo-aragnimada ilaalinta dhijitaalka ah ee hadhuudhka organic at the Grain of Russia-2022 forum